CEEBEY TACAAL: Lionel Messi iyo Luis Suarez ayaa ka Goolal Badan Real Madrid xilli cayaareedkan horyaalka La liga – Gool FM
( Catalan ) 08 Jan 2019. Barcelona ayaa ku bilaabatay 2019 guul 2-1 ay uga badiyeen Getafe iyagoo kaga mahad celinaya goolashaa Lionel Messi iyo Luis Suarez, kuwaa oo haatan dhaliyay 28-gool labaduba xagaagan horyaalka LaLiga.
Dhaliyaha Argentine ayaa kal horeba dhaliyay 16-gool xilli ninka reer Uruguayan uu shabaqa gaaray markii 12-aad, taa ayaa la micno ah iney kal cayaareedkan ka goolal badan yihiin safka u dheelaya Real Madrid, kuwasoo guud ahaan dhaliyay 26-gool.
Xiddigaha koonfur ameerika ayaa sido kale ka goolal badan naadiga Atletico Madrid, oo ololaha 2018/19 horyaalka ka dhalisay 26-gool.
Dhammaan kooxaha kale ee horyaalka, Celta Vigo ayay goolal isku mida dhaliyeen waana min 28-gool, halka kaliya Sevilla iyo Levante ay yihiin kooxaha ka goolal badan Messi iyo Suarez marka la isku daro wadartooda gooleed.
Gareth Bale oo ka dhaqaaqay Real Madrid !!! EEG Waxa uu Sameeyay Kulankii Guuldarro kasoo Gaartay Real Sociedad